Voalaza Fa Maty Tao Rosia Ny Zazavavy 3 Taona Iray Satria Tsy Nino Ny Fisian’ny SIDA Ny Reniny · Global Voices teny Malagasy
Voalaza Fa Maty Tao Rosia Ny Zazavavy 3 Taona Iray Satria Tsy Nino Ny Fisian'ny SIDA Ny Reniny
Voadika ny 09 Marsa 2017 12:20 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Español, Français, Português, Ελληνικά, عربي, English
Tokony ho eo amin'ny 2100 kilaometatra any atsinanan'i Mosko, ao an-tanàndehiben'i Tyumen, voalaza fa matin'ny SIDA ny zazavavy telo taona. Indrisy ho an'ilay zaza fa nandà ny fisian'ny otrik'aretina VIH ny reniny, Yulia Yakovleva, ary nihevitra fa vokatry ny fahasarotana avy amin'ny vaksiny hepatita B ny aretin'ny zanany vavy .
Noho izany antony izany, tsy nahazo fitsaboana antiretroviral ilay zazavavy, ary tandindonin-doza ny ainy ankehitriny .
Tamin'ny 2 Martsa , nanao antso tsy nitonona anarana nangataka fanampiana tao amin'ny Vkontakte ho an'ny vondrona mandà ny fisian'ny VIH i Yakovleva. Nilaza ny tenany ho toy ny vehivavy voan'ny VIH izy ary tsy nanaiky ho tsaboina noho izany toe-javatra izany.
Nilaza i Yakovleva fa telo taona lasa izay izy no niteraka ny zananivavy. Narary ilay zaza rehefa afaka tokony ho 18 volana ary “tsy nitombo intsony” tampoka teo. Ankehitriny, “tsy mipetraka sy tsy mihetsika izy,” hoy i Yakovleva nanoratra.
Last month, her daughter was reportedly hospitalized with anemia and malnutrition. Doctors diagnosed her with several conditions: lung damage, a fungal infection, Epstein–Barr virus, and carditis — all signs of advanced HIV infection.
Tamin'ny volana lasa, voalaza fa naiditra hopitaly noho ny tsy fahampian-dra sy ny tsy fahampian-tsakafo ny zananivavy. Nataon'ny dokotera fitiliana izy noho ny antony maro: aretin'ny havokavoka, ny fisian'ny mikraoba, otrik'aretina Epstein-Barr, sy ny aretin'ny fo izay tranga famantarana ny aretina VIH avokoa.
Nilaza i Yakovleva fa namela ny dokotera hanao fitilina VIH ho an'ny zanany vavy izy tatỳ aoriana , “mba tsy handrebirebena azy intsony ,” nahitana otrik'aretina VIH ny fitiliana rehefa nivaly .
Na izany aza, nilaza i Yakovleva fa mifikitra amin'ny fitsaboana ôsteôpathy sy hômeôpathy izy. Nitodika tany amin'i Olga Kovekh mihitsy izy raha nitady fanampiana, olona iray malaza ratsy amin'ny fandavana ny fisian'ny VIH izay mitonona ho toy ny “dokotera mpitsabo.” “Potiky”ny antibiotika izay voalaza fa nomen'ny dokotera sy noho ny vakisiny hepatita ny hery fiarovana sy ny retsi-pandrenesan'ilay zazavavy telo taona araka ny hevitr'i Kovekh .
Tsy nanafina anarana intsony i Yakovleva rehefa nanoratra ary nisaotra an'i Kovekh noho ny fizarany ny traikefany.
Nisarika ny saina voalohany momba ny tantaran'i Yakovleva ireo ao amin'ny “Miady amin'ny VIH/SIDA sy ny Zanany,” vondrona Vkontakte manjohy ireo olona mandà ny fisian'ny VIH sy ny SIDA, nanolo-tànana azy tamin'ny alàlan'ny hafatra mivantana ary nampitandrina azy tamin'ny fitokisana ny torohevitr'i Kovekh .
Tsy nankasitraka ny hafatra i Yakovleva, na izany aza, ary nangataka mba tsy ho helingelenina intsony.
Ao Rosia, antony mampigadra vonjimaika ny minia mandà mitsabo ny zaza manana aretina mikiky mba hamonjena ny ainy .
Araka an'i Elena Orlova-Morozova, izay dokotera ambony ao amin'ny Foibe Miady amin'ny SIDA ao Rosia, mahafantatra ireo mandà ny fisian'ny VIH amin'ny ankizy fa mety mandika lalàna izy ireo, ary matetika mandray fepetra mba tsy hisarihana ny sain'ny manampahefana, na izany tsy manatona ny foibe miady amin'ny VIH na maka ny fanafody antiretroviral any amin'ny dokotera kanefa tsy manome izany ho an-janany.
“Nisy tranga iray nahitana ray aman-dreny nitondra ny zanany nandositra tany Okraina, rehefa avy nampandre ny sampan-draharaha ara-tsosialy izahay,” hoy i Orlova-Morozova tamin'ny tranonkalam-baovao Znak.com.
Araka ny vondrona “Miady amin'ny VIH / SIDA sy ny Zanany,” fara fahakeliny, zaza tsy ampy taona miisa 60 ao Rosia no maty tato anatin'ny taona maromaro noho ny aretina VIH tsy voatsabo. Ankizy latsaka ny folo taona ny telo ambin'ny folo tamin'ireo maty ireo, hoy ny vondrona.
Nanao antso ho an'i Anna Kuznetsova, mpiandraikitra ny zon'ny ankizy ao Rosia ny “Foiben'ny SIDA” tsy mitady tombontsoa izay fikambanana naorin'ny mpanao gazety Anton Krasovsky tamin'ny herintaona, mba hanaovan'ny birao fanadihadiana momba ny raharahan'i Yakovleva.
Azia Atsinanana 5 andro izay
Karaiba 4 herinandro izay